'UCOBRA KAI' WOKUGQIBELA WOKUBAMBA, IXESHA LESI-3, ISIQENDU SE-10- 'NGE-19 KADISEMBA' - IINDABA
'UCobra Kai' Finale Recap, Ixesha lesi-3, Isiqendu 10 - 'UDisemba 19'
Ixesha lesithathu le UCobra Kai inyuse ubushushu kwiminyango yokhuphiswano, nangona kunjalo eyona ngxaki ye-dojos kodwa kukubuya.
Emva kokukhangelwa komphefumlo kwathatha uDaniel waya eJapan noJohnny waya… kakuhle, isitulo sebhari, ukuya kumhlobo omdala wanceda aba-2 babengavisisani nengqondo yokungcwaba umnqwazi. Ukulandela enye inkqonkqozo kunye noCobra Kai, uJohnny omtsha we-Eagle Fang dojo kunye neqela likaDaniel Miyagi-Do ekugqibeleni bamanyene neqela likaJohn Kreese elinobundlobongela kwaye alikho iimfundiso zenceba. Njengokuchaphazeleka kwegazi ngamanqindi phakathi kwabaphengululi kutshabalalise indawo yokuhlala yaseLaRusso, iKreese, uJohnny noDaniel bavuma ukusombulula imiba ngendlela ethandabuzekayo: ngomdlalo wekarati, enyanisweni!
Apha, abavelisi bakarhulumente kunye nabadibanisi bobabini uJosh Heald, uJon Hurwitz noHayden Schlossberg bayalichitha ixesha lonyaka, bekunye nentsebenziswano entsha kaDaniel noJohnny, ibali elibuhlungu likaKreese, umboniso wokubonisa ukungcungcuthekiswa nokuba ingaba liXesha lesi-4 iyakuba lidabi lokugqibela umphefumlo weNtili.
yintoni ubuhlanga pokimane
I-TVLINE (* 10 *) |Ngaba ngawo onke amaxesha ubuceba ixesha lesithathu ukugqiba ngomanyano lukaJohnny noDaniel? Kwaye kutheni eli nqanaba ngaphakathi kwebali lelona xesha lilungileyo lokuba bacofe inyama yabo? Andicingi ukuba iya kuba icocekile ngokupheleleyo kubo.
IMPILO (* 10 *) | Ukubanika lo mzuzwana yinto enye esithe sahlala sichonga ukuba iza kuza. Ngamaxesha onke besiziva ngathi eli ibilixesha lokuba yenzeke, nangona kunjalo siyenza ngendlela apho siye sazinzisa ukuba ngoobani na abalinganiswa. Banobungqongqo obomeleleyo kwifilosofi yabo, iinkolelo kunye nokudlula. Kubonakala ngathi lidabi eliya phambili ngokwenyani, umda ocacileyo osetiweyo kunye neemeko ezibazisileyo kule yesibini, kodwa ixesha liya kwazisa ukuba imbali eyadlulayo iyaziphinda bahlala bewela kwimikhwa yakudala kwakhona, okanye ukuba bayahamba ukubanakho ukutshintsha imozulu yesaqhwithi kunye nokuxhomekeka komnye komnye ukwenza umsebenzi onzima wento oyichwetheza ubuhlakani.
I-TVLINE (* 10 *) |Ukugqitywa kwe-Kreese flashback kusinike imvelaphi enqwenelekayo kuyo UCobra Kai ‘Yeyona ndoda ingenampilo inkulu. Kutheni le nto enesibambiso esinje ngaphakathi kwedojo, ngaphandle kwayo yonke le nto kule minyaka?
IHURWITZ (* 10 *) | UCobra Kai usegazini lakhe. Useke uCobra Kai. Kwakubalulekile kuthi ukuba sithathe lo mlinganiswa ubuchongileyo kuyo yonke le minyaka - ngubani nje ongenampilo… nguDarth Vader, ukhohlakele - kwaye uyayiqonda indawo umntu onje avela kuyo. Indoda ethetha rhoqo ngenceba. Kutheni le nto kubaluleke kangaka kuye? Sidibana naye kwiXesha lesi-3 ngaphambilana neVietnam kwaye siyabona ukuba wayengumntu ongaphantsi kwendlela yakhe efanelekileyo, mhlawumbi enobomi obubi ngakumbi kunokuba, utsho njalo uDaniel okanye uMiguel. Ukujongana neemeko aziphetheyo phaya, kwaye kufuneka abonakalise inceba kwaye abone ukuba umhlaba awuniki mikhwa mihle… oko kuye kwaba nempembelelo kuye. Yayiyingcali eyothusayo ahamba nayo ukuza kuthi ga ngoku.
Ngamaxesha onke besicela, Kutheni uJohn Kreese eqala ikarati dojo? Zisuka nje bekukho ngenxa yokuba ekholelwa ukuba inye into yokubonelela abantu abancinci, iiklasi zobomi acinga ukuba zibalulekile ukuba aba bantwana bazi, ukuzikhusela ebomini. Kwiingcinga zakhe, ufundisa abantu into ebalulekileyo ukuyifumana ngobomi. Ukubona ukuba uCobra Kai waphinda waziswa loo moya kuye. Wayebuncamile ubomi kwiindlela ezininzi. Ke, ukuba nesihlalo somqolo wokungena xa ubona uJohnny etshintsha phakathi kweendawo eziphambili acinga ukuba zibalulekile kuCobra Kai yayingumthamo ogqithileyo wokuthatha. Uye wagqitywa njengokuba wayenjalo xa wayeqala u-dojo kwiminyaka embalwa edlulileyo ukuqeqesha ulutsha lwase-Valley ukuba lulungele umhlaba abaya kujongana nawo.
I-TVLINE (* 10 *) |Kwincam yesiphelo, uKreese waya kumhlobo wakhe omdala wezomkhosi uTerry ukuba amncede. Ngaba loo msebenzi uphosiwe kodwa, kwimeko apho, ngubani onokumvuyela?
IHURWITZ (* 10 *) | Njengokuba isiphumo seKreese sifikelela nakubani na, oko akuthethi ukuba ubuyela kumdlalo. Oko kukhankanyiwe, kumdlalo wethu, sizama ukuhambisa kwakhona umlingisi owahlukileyo owenze abalinganiswa ukuza kuthi ga ngoku kangangoko kunokwenzeka. Sonke sithanda isimilo sikaTerry Silver kwi IKarate Kid 3 kunye nokuboniswa kwakhe nguThomas Ian Griffith, ke ukuba lo mlinganiswa wayeza kubuyela kwiSizini 4, sinethemba lokuba uya kuba nguye owonwabayo.
ISHLOSSBERG (* 10 *) |Akukho kuqinisekiswa, into inokwenzeka, eneneni. Kodwa ndiza kuthi: Ukuba uyamthanda uTerry Silver, lo ngowona mboniso ufanelekileyo wokungena ukuze ubone ukuba uyavela na. [ Ihleka ] Kodwa asizukuthembisa into kweli nqanaba ngenxa yoko konke kuyonwabisa.
I-TVLINE (* 10 *) |Kutheni le nto uhambo lukaDaniel kwakhona oluya eOkinawa lwalubalulekile kumxholo webali lakhe, kwaye indlela eyamnceda ngayo yamdibanisa ukuze enze idrama eyenzeka ekugqibeleni?
ISHLOSSBERG (* 10 *) |Ilifa lika Mnu. Miyagi yinxalenye enkulu yengqondo yakhe, kwaye nokubona isihloko seMiyagi singcoliswa ngenxa yento eyenzekileyo ekholejini… uyakuthwala ukuphendula. Unobungozi nje obukhulu kunangaphambili kwaye wayefuna uncedo lukaMnu Miyagi. Kukho ezinye iindlela zonxibelelwano nezangaphambili. Kukho umthandazo, kuyiwa emangcwabeni, kwaye kwabanye abantu, kuthatha utyelelo lokuncamathisela neengcambu zabo. Ikhaya likaMnu Miyagi laseOkinawa yindawo yokuzalwa yeMiyagi-Do karate kuDaniel, ke ngoko yanikezela ngezisombululo zengqondo nezengqondo kwimibuzo yakhe.
Ngokudibanisa nabambalwa balaba bantu IKarate Kid Icandelo II Ngokukodwa uKumiko, usesikhundleni sokumnika ukuqonda kwiingcamango zikaMnu Miyagi. Ngamanye amaxesha ukuba uyaluphala kwaye uye uthabathe izinto zikanyoko notata wakho xa kunokwenzeka ukuba banikezele, ungabona into yabo kwaye uqaphele into enye ngabo ongazange uyithathele ingqalelo njengomntwana. Ngamaxesha onke sithanda le nto yokuba uDaniel ujonge uMnu Miyagi njengolu qeqesho lokuqonda olunazo zonke izisombululo kuyo yonke into, kwaye xa uKumiko emfundela ileta, uyaqonda ukuba uMnu Miyagi wayengenazo zonke izisombululo, kwaye oko UDaniel yayiyeyona nto isombulule ubomi bakhe. Uyaqonda ukuba KULUNGILE ukungabinazo zonke izisombululo kuyo yonke into. UMnu Miyagi akazange.
I-TVLINE (* 10 *) |Ngaba bezikhona iingxoxo emva kwesiqhushumbisi malunga nokuba kufuneka kude kangakanani ukuthatha amanqaku oxhatshazo kumdlalo?
ISHLOSSBERG (* 10 *) |Sidinga umboniso ukuze sisebenze ngendlela efanayo IKarate Kid basebenze, nganye ngendlela yokuxhaphaza ngokwesiko, kodwa ukongeza kwindlela yangoku. Ukusukela kanye ekuqaleni kweXesha loku-1, sibandakanye amanqaku oxhatshazo lwe-cyber, nokuba kukungabinantlonelo ngokwasemzimbeni okanye ukuhlazisa i-slut, imiba enokuthi mhlawumbi ibe zezifundo zangoku ngaphandle kwale yokuba bezisenzeka iminyaka. Siyayidinga ukuba inxulumene kwaye ixhaphakile, eneneni eyila uxinzelelo kubabukeli abanjengabo, Thixo, ndiziva ndinempilo kwaba bantwana. Ndifuna ukuba babethe. Lowo ngumlingo we IKarate Kid . Yile ndaba yangaphantsi.
UFrank hogan xa ebiza intliziyo
Imixholo yokuxhaphaza yayiyelelene kweli bali nje ukuba siqale ukubeka UCobra Kai kuRalph Macchio. Ayisiyonto yokudlulisa kuphela bonke oonobumba esibathandayo kwaye sifumanise ukonwatyiswa okumnandi kwaseKreese; kungenxa yoko le nto inxulumene nayo ngenxa yokuba ibikho. Eli bali kunye ne-franchise zi-cathartic kakhulu kubantu abazifumana behamba ngayo. Awunqweneli ukuphazamisa abantu isixa esigqithisileyo sendawo abangakwaziyo ukugcina ubukele umboniso, nangona kunjalo ubomi bunokuphazamisa ngokubanzi. Akunjalo nje ukuxhatshazwa komzimba, kukuxhatshazwa kwengqondo. Abantwana banokujika bazibulale ngenxa yale nto. Asinqweneli ukoyika kakhulu ekuchukumiseni izihloko, nangona kunjalo sizama ukubukela. Ngokwesiqhelo imizuzu emi-5 kamva, kukho umdlalo othile ohlekisayo, nawo. Siyahamba siyonwaba, kodwa ukongeza sithatha imixholo yokuxhatshazwa.
I-TVLINE (* 10 *) | Kumabinzana kaJohnny abiza abafundi bakhe beekholeji ukuba babe phantsi okanye ipenisi yokuphefumla, ngaba ukhe wanazo naziphi na izicwangciso zokubandakanya umlinganiswa we-LGBTQ ukukhanyisa ukwenzakala okunokuvela kolwimi?
IHURWITZ (* 10 *) | Sithetha ngalo lonke uhlobo lwabalinganiswa ukuze songeze kwihlabathi kwaye siqwalasele indlela abanokuphendula ngayo okanye abasabela ngayo kwingqondo uJohnny anayo - uhlobo lwalo mqolomba ongafakwanga, 'indoda eyi-80s- kunye nokwahlula i-verbiage yakhe njani ulutsha lweli xesha luyayiphendula kunye nembonakalo enokuba nayo. Ke, sithethile ngokupheleleyo ngokubandakanya abalinganiswa abavela kweli qela, kwaye, nangona kunjalo, zonke iintlobo zolutsha ezingamelwe kakuhle.
ISHLOSSBERG (* 10 *) |UMiguel, ngezinye iindlela, ngaphandle kokuba akangobufanasini, umele ukuthambeka okuthe ngqo kunye necala lokulwa. Ngamanye amaxesha uJohnny akamvumeli ukuba ancokole, eyinxalenye yomcimbi. Kwisifundo sokuqala, uMiguel umbiza esithi, Awunqweneli ukuba yi-p-ssy, kuya kufuneka uneebhola. Ngokukhawuleza ukuthanda kukaMiguel, Uh, ndiziva ngathi uthethelela ngokwesini kanye apha? kunye noJohnny, Cwaka! Ithemba lethu kukuba ababukeli banokwazisa ngokwembono yabafundi ukuba si Ndiyazi ukuba uJohnny ungasemva kwezi meko. Akuzange kufike kuloo ndawo indawo [ukuxhatshazwa] ichaphazele nabani na ngakumbi, nangona kunjalo yinto enye ngawo onke amaxesha umngcipheko wokufumana ezongezelelweyo njengoko amaxesha eqhubeka kwaye sazana nabafundi beekholeji abongezelelweyo.
I-TVLINE (* 10 *) |Umboniso sele uhlaziyiwe kwiXesha lesi-4, nangona kunjalo ukhe wayiqwalasela indawo ingqokelela engaphaya kwayo?
IMPILO (* 10 *) | Sinesiphelo kwiintloko zethu. Sikhe sanalo ngokufanelekileyo okwexeshana, kwaye alikho kwiXesha lesi-4. Ezingqondweni zethu, ngoku sinexabiso lamaxesha 'ebali elibalulekileyo ukwazisa kwangoko kunokuba sifike kuloo mdlalo. Inokuba yingxoxo eqhubekayo kunye namaqabane ethu amatsha kwiNetflix. Ngaba singabhala kulo mdlalo? Ngaba sonke siyazi ukuba iyeza? Akunjalo ngamaxesha onke nge-tv kwaye siyayihlonipha loo nto. Okwangoku, siyanyamezela ngokubhala ngesantya esifanayo kunye nendlela efanayo ebesibeke kuyo kwasekuqaleni.
Ngoku yiflip yakho! Hlela ibanga lokugqibela kunye nexesha elingaphantsi, emva koko ulahle zonke izimvo zakho zeXesha 3 ngaphakathi kweZimvo!
Thatha iPoll yethu
Kristina ukukhanya kwelanga jung instagram
Izigaba: Iwiki Amazon-Prime Hollywood
ijerry purpdrank igama lokwenyani
I-chipotle ivulekile kwiminyaka emitsha
chipotle usuku lonyaka omtsha
I-Starbucks yonyaka omtsha weeyure